Nchọpụta Google | Martech Zone
Google gara n'ihu na-atụ m n'anya. Ọ bụrụ na m nọghị na Indiana na Google na Mountain View, agara m etinye akwụkwọ maka ọnọdụ onye nlekọta ugbu a. Tinyere ahịrị nke 37signals, Google nwere ikike ịmata ụdị nsogbu a, wee weta azịza ya. Oge. Ọ dịghị fancy stof… ha nanị mee ka ọ na-arụ ọrụ!
Google Codesearch nyere gị ohere ịchọ koodu nke edobere na net. Ebe ọ bụ beta, enwere m ụfọdụ nzaghachi bara uru maka Google:
Ọtụtụ programmers ọkachamara… PHP, .NET, MSSQL, wdg. Echere m na nhọrọ ịtọ mmasị gị maka ọchụchọ ma nwee peeji ahụ na-echekwa ha site na akaụntụ onye ọrụ ma ọ bụ site na kuki ga-adị mma. Ọ bụrụ na ha emeghị, aga m ewu nke m (mara mma dị mfe ịgbakwunye lang: php on there).
Kedu ihe ị ga-eme banyere virii ma ọ bụ koodu nwere ike imebi iwu nwebisiinka? Ihe mbu nke ndi enyi m choputara na usu na inwere ike icho ya Key Generators, imaatu: Winzip. Ha aghaghi ighota na nke a gha aburiri ebe ndi hackers na ndi ozo!
O di nwute na, e nweghị ụzọ biputere isiokwu banyere ide koodu na koodu samples. Enwere m ekele maka koodu dị na ya, mana nke kachasị mkpa bụ ịkọwa ihe ọ na-eme na otu o si arụ ọrụ. Ọ ga-amasị m itinye ohere ntinye blọgụ m n'okpuru isiokwu ụfọdụ akọwapụtara, ikekwe nhọrọ maka isiokwu ọchụchọ.
Nke a bụ nkatọ na-ewuli elu… n'ụzọ ọ bụla ọ dịghị eweda mkpa ọ dị ngwa dị egwu! Amalitela m iji ya ma weghachite ụfọdụ nsonaazụ na-ekwe nkwa.